कति संभव छ देउवा बदलिन?
शेरबहादुर देउवा त्यस्ता भाग्यमानी अपवाद हुन, घुमिफिरी पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्ने र राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति केन्द्रमा रहिरहने अवसर प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
पुस १६, २०७८ १०:०१
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। समयले एउटै व्यक्तिलाई बारम्बार अवसर दिँदैन । शेरबहादुर देउवा त्यस्ता भाग्यमानी अपवाद हुन, घुमिफिरी पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्ने र राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति केन्द्रमा रहिरहने अवसर प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
अबको पाँच बर्षसम्म मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासको गन्तव्य धेरै हदमा उनले लिने भूमिका र निर्णयबाट तरंगित हुने अवस्था छ । यसर्थ पनि देउवाका लागि आफूले आफैंलाई बदल्ने यो स्वर्ण अवसर हो । तर, बदलिन देउवाका लागि सबैभन्दा पहिला घरभित्रैको चुनौति सामाना गर्नुपर्ने उनीसँग निकट सम्वन्ध राख्ने नेताहरू नै बताउने गर्छन् ।
कार्यकारी प्रमुखका रुपमा गर्ने कार्य सम्पादनमा देउवा आँफै कति स्वतन्त्र छन् ? साँच्चै उनी बदलिन चाहे घरभित्रैबाट सिर्जना हुने तगारो नाघ्न सक्लान् ? त्यसपछि उनका वरिपरि रहने स्वार्थ समूहबाट बाहिर निस्कनुपर्ने हुन्छ, त्यो कति संभव होला ? साढे पाँच महिनाको सरकार संचालनको अनुभवले देउवा यी सबै पर्खालहरू नाघेर आफूलाई बदल्ने मार्गमा हिँड्लान् भन्ने आशा भने धेरै न्यून छ ।
सभापतिका रुपमा पार्टीमा दोस्रोपटक शक्तिशाली बनेर आएका देउवालाई कतै मनमा त लाग्दो हो, राजनीतिक जीवनको अन्तिम यात्रातिर आउँदा दुनियाँले सम्झने गरि काम गरेर देखाऊ । तर, उनी यस्तो स्वार्थी मानिसहरूको दलदलमा फसेका छन्, जसबाट बाहिर निस्कन उनलाई सामान्य चाहनाले मात्रै संभव छैन ।
प्रधानमन्त्री बनेको यतिका दिनसम्म उनी किन आफ्नै सचिवालय बनाउन सकिरहेका छैनन् ? उनको सचिवालय स्वकीय सचिव भानु देउवाको भरमा छ । प्रधानमन्त्रीसँग सचिवालयमा नत राजनीतिक सल्लाहकार छन, नत परराष्ट्र मामलाका कुनै विज्ञ नै । प्रेस सल्लाहकार नै कसलाई बनाउने भन्ने घरभित्रै अन्तरद्वन्द्वले अहिले सम्म औपचारिक रुपमा कसैले नियुक्ति पाउन सकेको छैनन् ।
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयबाट सम्पादन हुने काम ४८ वटा तोकिएका छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अवशिष्ट अधिकार समेत प्रयोग गर्न पाउने गरि आफूमा केन्द्रित गरेका शक्ति फर्काउन उनले किन हिच्किचाहट गर्दै आएका छन् ? अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ती शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग, गृहमन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता शक्तिशाली निकायहरू अझै प्रधानमन्त्री मातहत नै छन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले यीसहित एक दर्जन निकाय र निगरानीका संयन्त्रहरू आफू मातहत ल्याउँदा त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका देउवाले ‘अधिनायकवाद’ को संज्ञा दिएका थिए । स्वायत्त निकाय रहनुपर्ने महान्यायाधिवक्ता र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता निकायहरू प्रधानमन्त्री मातहत नै रहदै आएका छन् । देउवा प्रधानमन्त्रीमा आईसकेपछि अर्थले राजस्व अनुसन्धान विभाग र गृहले अनुसन्धान विभाग आफ्नो मातहत राख्न नखोजेका पनि होइनन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाको अनिच्छाका कारण संभव भएका छैनन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (हाल खारेज), लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, गरिबी निवारण कोष जस्ता महत्वपूर्ण राज्यका निकायहरू प्रधानमन्त्री मातहतमै छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाका कार्यकारणी निर्णयमा उनकै श्रीमति आरजु राणाले दख्खल दिने गरेका घटनाहरू यत्रतत्र सुनिने गर्छन् । कार्यकारणीमाथि घरभित्रैबाट हुने सीमाहिन यस्ता हस्तक्षेपले प्रधानमन्त्री देउवालाई आलोचित त बनाएको छ नै, समग्र पार्टीलाई बदनाम बनाउने काम गरेको कांग्रेसका नेताहरू सुनाउने गर्छन् । नेता अर्जुननरसिंह केसीले केही समयअघि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै सरकार कसले चलाउँदै छ भन्दै आरजुका विवादास्पद कदमलाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए । त्यतिबेला पार्टीका अन्य कतिपय मन्त्रीहरूले शक्तिशाली र आर्थिक चलखेल हुने क्षेत्रका नियुक्तिहरूमा ‘म्याडम’ को सहमति विपरित संभव नहुने भनेर खुलेआम भन्ने गर्थे । सरकारका विवादस्पद निर्णयकापछि कुनै न कुनै रुपमा आरजुकै नाम जोडिने गर्छ । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र जग्गामा केही नाम चलेका व्यवसायीहरू मार्फत् लगाली गरेको चर्चा समेत कांग्रेसवृत्तमा व्याप्त छ ।
यसैपटक धनाढ्य उमेश श्रेष्ठलाई तत्कालिन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री (हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा) बनाउनुमा उनकै प्रमुख जोड रहेको सूचना बाहिरिएको थियो । यसैपटक राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्तिदेखि आर्थिक चलखेल हुने क्षेत्रका नियुक्तिहरूमा समेत उनले हस्तक्षेप गर्ने गरेको नेताहरू सुनाउने गर्छन् । पछिल्लो पटक राजस्व अनुसन्धान विभागले नीजि व्यवसायी र कम्पनीमाथि छापा मारेका घटनामा समेत आरजुकै नाम जोडिन थालेका छन् ।
राजस्व छली गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न खडा गरिएको निकायलाई दुरुपयोग गर्दै आर्थिक लेनदेनको हतियार बनाउन खोजिएको आरोप सरकारी अधिकारीहरूले नै लगाएका छन् । एक व्यवसायीकाअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागका जिम्मेवार अधिकारीले नै अनुसन्धानको कामलाई ‘म्याडम’ तिर देखाउँदै पन्छिने गरेको बताउँछन् । कर्मचारी क्षेत्रमा हुने सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा योग्यता, क्षमतालाई होइन, आर्थिक लेनदेनलाई मापदण्ड बनाउने गरिएको घटना नौलो होइन ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला यस्ता कामका पछि सबैभन्दा बढी आरजुकै नाम जोडिन्छ । आफ्ना पार्टीका मन्त्री रहेका कतिपय ठूला नियुक्तिहरूमा मन्त्रीहरूले नै ‘माथिबाट मिलाएर आउनु’ भनेरै हाकाहाकी भन्ने गरेका छन् ।
पंचायतकालमा पनि नडगमगाएको न्यायलयमा यति लामो संकट चुलिँदा पनि प्रधानमन्त्री अनादेखा जस्तै छन् । आफ्नो स्वार्थ नमिल्दा तत्कालीन प्रधानन्याायधीश सुशीला कार्कीमाथि तत्क्षण महाअभियोग लगाउन पछि नपर्ने, तर वर्तमान प्रधान्यायायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको न्यायिक विचलनको बिरोधमा सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू बिरोधमा उत्रदा पनि प्रधानमन्त्रीले मौनता साँधेर देखाएको दोहोरो मापदण्डले लोकलाई रिझाउन सकेको छैन ।
देउवालाई आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई पुरानै साखमा फर्काउनु पर्ने दबाब छ । पार्टीभित्र युवा पदाधिकारीहरूको बेगमा हिँड्नुपर्नेदेखि पुराना र युवा नेताहरुलाई मिलाएर अघि बढनुपर्ने चूनौतिमा उनी छन् । देउवाकै कार्यकालमा पार्टीमा निष्ठावान र दुःख पाएका कार्यकर्ताहरू पाखा लाग्ने र धनाढ्य र पैसावालाहरूको बोलवाला बढ्दै जान थालेको गुनासो पार्टी पंक्तिमा व्याप्त छ । विश्वको धनाढ्य सूचीमा परेका विनोद चौधरीदेखि व्यवसायी अनिल रुँगटा, उमेश श्रेष्ठ, विन्दु थापा, ठेकदारहरू जीपछिरिङ लामा, मोहन आचार्य, बहादुरसिंह लामा, कान्छाराम तामाङ, इन्द्र बानियाँजस्ता व्यक्तिहरू अहिले उनकै वरपर छन् । पार्टीभित्र झ्याङ्गिदै गएको सुकिला मुकिलाको घेराबाट बाहिर निस्केर निष्ठावान कार्यकर्तालाई पार्टीप्रति आशा जगाईराख्न देउवाले लिने सामान्य अठोटले मात्रै पुग्दैन ।
आसन्न तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व उनको काँधमा छ । विखण्डनको राजनीतिबाट राष्ट्रिय मूलधारमा आएका चन्द्रकान्त (सिके) राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले निर्वाचनको मुखमा तराई–मधेसमा हिंसापूर्ण आन्दोलनको झिल्को बाल्न खोजिरहेको छ । किसानको नाममा तराई–मधेसका केही जिल्लामा राउतकै अगुवाईमा अहिले भइरहेका हिंसात्मक घटना त्यसैका संकेत हुन् । शान्तिपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम र विचारबाट जनता आकर्षित गर्न नसकेपछि हिंसाको बलबाट स्थापित हुने दाउ राउतको छ । यस्ता गतिविधिलाई बेलैमा नियन्त्रणमा लिने काम गर्न सकिएन भने आगामी निर्वाचनमा त्यसको असर पर्ने देखिन्छ ।
केही समयअघि महाधिवशेनलाई लिएर पार्टीभित्रका अन्तरसंघर्षका क्रममा देउवाले आफ्नो आनिबानीमा परिवर्तन हुन कठिनाई हुने कुरा बताएका थिए । ‘म खरो छु, कसैले भन्दैमा मेरो बानी परिवर्तन हुँदैन’ त्यतिबेला आक्रोशको भावमा उनले भनेका थिए । साँच्चै उनले भनेजस्तै विगतकै शैली र आदतमा परिवर्तन नहोला त ? राजनीति जीवनकै अन्तिम घडिमा आईपुग्दा उनमा कुनै बदलावको छेकछन्दै नहोला त ? पूर्वजहरूले जस्तै भविष्यका पुस्तालाई सम्झनलायक केही न केही काम उनीबाट नहोला त ? पक्कै पनि राम्रो काम गर्ने सपना सबै नेतामा हुन्छ नै । तर, त्यसका लागि कसले कति प्रयत्न गर्‍यो ? संभावनाका सीमासम्म पुग्न सक्यो कि सकेन भन्ने मुख्य कुरा हो । देउवाले सुरुवात गर्नुपर्ने बाटो शासकीय सुधारबाटै हो । यसअघिका शासकीय कार्यकाल उनका लागि सुखद छैनन् । यसअघि मूल्य, मान्यता र लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिलाई जोखिममै धकेलेर देउवाले आफूलाई केन्द्रमा राख्दा धेरै बदनाम खेपे ।
पार्टीमा शक्तिशाली बनेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई बदल्न पहिला सरकारका कामकारवाहीबाट सुरु गर्नुपर्छ । आम नागरिकमा उनीप्रति धेरै ठूलो आशा र अपेक्षा छैन । जनताका पक्षमा केही सामान्य कामको थालनीले पनि उनले वाहीवाही पाउन सक्छन् । राजनीतिको उत्तरार्द्धमा रहेका देउवाले विगतका खराब ‘ट्रयाक रेकर्ड’लाई बिर्सनलायक काम गर्न सक्दा मात्रै उनी पार्टीभित्र शक्तिशाली सभापति भएको र पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेको औचित्य पुष्टि हुनसक्छ । नत्र, मुलुकको विकासक्रम र आर्थिक सम्मृद्धिका हिसाबले समयको बर्बादीबाहेक केही हुने छैन ।